यी हुन् एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य
18th October, 2021 Mon १५:३०:०३ मा प्रकाशित
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले तीन सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र ३४ सदस्यीय तीन केन्द्रीय आयोगसहित चार सय ३७ केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) जारी गर्दै पार्टीको सांगठनिक संरचना र नेताहरूको जिम्मेवारी सार्वजनिक गरेका हुन्। अपानिमा केन्द्रदेखि जिल्लाका नेताहरूको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिएको छ।
अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार एसको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको गठन गरिएको छ। नेकपा एसले अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सचिवालय बनाएको छ। सचिवालयमा झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रमेख हमाल, जयन्ती राई, डा. बेदुराम भुसाल, प्रकाश ज्वाला, डा. गंगाधर तुलाधार, डा. विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा छन्। महासचिव डा. बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालय ५ सदस्यीय बनाएको छ। प्रकाश ज्वाला, डा. गंगालाल तुलाधर, डा. विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवडा छन्।
त्यसैगरी, एसले प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीको चयन गरेको छ। प्रदेश १ को इन्चार्ज घनेन्द्र बस्नेतलाई बनाएको छ। सहइञ्चार्जमा राजेन्द्रकुमार राई, अध्यक्ष सुरेश कार्की, उपाध्यक्ष बलदेव चौधरी र राजन राई छन्। सचिवमा महेश रेग्मी र उपसचिवमा सरिता थापालाई चयन गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश २ को इन्चार्जमा धर्मनाथप्रसाद साह, सहइन्चार्जमा रामप्रित पासवान, रत्नेश्वर गोइत, कल्याली खड्का तथा अध्यक्षमा रामचन्द्र यादव र सचिवमा लक्ष्मण पौडेललाई चयन गरेको छ। बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा केदार न्यौपाने, सहइन्चार्जमा जीवनराम श्रेष्ठ र कृष्ण खनाल तथा अध्यक्षमा सावित्रा भुसाल र सचिवमा लमक्ष्ण लम्साल चयन भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा केशवलाल श्रेष्ठ, सहइन्चार्जमा चुडामणि जंगली, शारदा सुवेदी चयन भएका छन् भने अध्यक्षमा तुलबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्षमा रामजी शर्मा, सचिवमा प्रतावलाल श्रेष्ठ उपसचिवमा श्रीनाथ बराल र रेखा थापा चयन भएका छन्। लुम्बनी प्रदेशको इन्चार्जमा भागवत विश्वासी, सहइन्चार्जमा सोमप्रसाद पाण्डे र दलबहादुर सुनार छन्। अध्यक्षमा मेटमणि चौधरी र सचिव राजु गुरुङ चयन भएका छन्।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा प्रकाश ज्वाला, सहइन्चार्जमा चन्द्रबहादुर शाही, हंशबहादुर शाही र शेरबहादुर केसी चयन भएका छन्। सचिव ठगेन्द्रप्रकाश पुरीलाई सचिव बनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज गरिमा शाह र सहइन्चार्जमा प्रेम आले र नीरा जैरु, अध्यक्षमा विक्रम शाहीलाई बनाइएको छ। हर्कबहादुर सिंह, शेरबहादुर कुँवरलाई उपाध्यक्षमा दिनेशचन्द्र सुवेदी, सचिवमा दीर्घ सोडारी, तारा लामा र माया भट्टलाई उपसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। उपत्यका विशेष प्रदेशको इन्चार्ज विश्वनाथ प्याकुरेल, अध्यक्ष केदार सञ्जेल र सचिव विष्णु लम्साल भएका छन्। सम्पर्क समन्वय कमिटीको संयोजक विजय गुरुङ, सहसंयोजक लक्ष्मण केसी र सचिवमा चन्द्र शाही छन्।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा शिवबहादुर देउवा, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्षमा भरतकुमार श्रेष्ठ, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्षमा माधव पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा(एस) १३४ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ३३ सदस्यीय केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बनाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका ७ पदाधिकारीमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्नेछ।